UBilly Crudup ukuba abe yiNkanyezi kwiNew Apple TV + Series "Molo ngomso" | Ndisuka mac
I-Apple isihogo esijolise ekwenzeni Apple TV + iqonga lokusasaza ividiyo eliza kuthathelwa ingqalelo xa umbukeli ejonga ukuba yeyiphi ayirhumele. Ngonyaka onesiqingatha kuphela wobomi, sele iqala ukuba nesithembiso sokumamela kunye nokubonwayo esinqabileyo okanye esincinci, esinomgangatho ongaphaya kwamathandabuzo.
Kwaye veki nganye sineendaba ezithe kratya malunga neeprojekthi ezintsha zothotho kunye neemovie ukwandisa isithembiso sayo. ngoku sifumanise ukuba umdlali odlalayo UCory Ellison Kwi "Umboniso wasekuseni" uya kudlala indawo kuthotho olutsha lweApple TV +. Enye kwakhon.
Umhla wokugqibela ulungile iposti que UBilly Crudup, odlala ngoku uCory Ellison kwi "Umboniso wasekuseni," uqeshiwe ukuba enze inkqutyana kuthotho olutsha lweApple TV + enesihloko esithi "Molo ngomso," esaziwa kancinci ngaphezulu kwesihloko.
Yenziwe kwaye yabhalwa ngu-Amit Bhalla noLucas Jansen (Igazi, iMali), «Molweni ngomso»Isetelwe kwilizwe elizayo.
UCrudup uzakudlala uJack, ophambili kuthotho. Ungumthengisi onetalente kwaye onamabhongo azama ukweyisela abanethemba lokuthenga inyanga ngenyanga.
Olu luhlu lukhokelwa ngu UJonathan Entwistle, Eyaziwa ngokuba "Ukuphela kweLizwe eliFake." UCrudup, ngaphandle kokuba ngumdlali ophambili, uya kuba ngumvelisi olawulayo. Kunye naye, baya kuvelisa uthotho lweBhalla noJansen. UBlake Griffin, uRyan Kalil kunye noNoah Weinstein nabo ngamaqabane akhulisa imali ngenkampani yokuvelisa iMortal Media.
Iprojekthi ikwisigaba sokuqala, ukugqiba ukubhala izikripthi, kunye nokwenza umsebenzi wemveliso ngaphambi kokufota kwexesha lokuqala. Ukongeza ekubonakaleni kolu luhlu lutsha, uCrudup uyasebenza nakwixesha lesibini le «I-Morning Show“Yeyiphi eza kuqala kwiApple TV + kamva kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UBilly Crudup ukuba enze inkwenkwezi kuthotho lwe-Apple TV + "Molo ngomso"